Fiidyaw Tobobar Gaadhi Xanuum Clean Diesel ah | Puget Sound Clean Air Agency, WA
Fiidyaw Tobobar Gaadhi Xanuum Clean Diesel ah
ScRAPS DPF Barnaamijka Nadiifinta ama Badalka Fagtuurka
Hadii aad gaadhigaaga ku badashay mid 2007 ah ama gaadhi ka danbeeyay barnaamijka ScRAPS, waxaad dhici karta inaad u qalabto abaalmarin $500 ah oo nafiidinta ama badalka DPF ah. Si aad ugu qalabto $500 waa inaad daawataa fiidyawyada oo aad dhamaystirtaa imtixaanka boga hoostiisa ah. Tani waa siin mudo gaaban ah oo 100 ee ugu horeeya ah ama ilaa lacagtu dhamaanayso.
Buuxiyo DPF Cleaning History Xaashida
ScRAPS Barnaamijka Fagtuurka Helaha
ScRAPS keliya ka qayb galayaasha:
Hadii aad kamid noqoto 100 ee ugu horeeya ee kaqayb galayaasha ScRAPS ee ka gudba imtixaankan, waxaad heli kartaa kuuboon $500 ah oo badal ama nadiifinta DPF ah.
Waa inaad si wanaagsan u daawataa fiidyawga. Imtixaankan waxaa la qaadan karaa bishii hal mar. Tusaale ahaan, hadii aad imtixaanka gashay Janaayo oo aad ka gudbi wayday, waa inaad sugtaa ilaa Febraayo si aad dib ugu gasho.